I-Bilberry Cottage eStumpfields - I-Airbnb
I-Bilberry Cottage eStumpfields
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguStumpfields
Imiswe kwiiNtaba ze-Nilgiri kwi-8,000ft, ngaphantsi kwe-Doddabetta Peak, eli gumbi lokuzenzela ukutya elinekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo linegumbi lokulala elikhulu kunye nendawo yokulala. Ijikelezwe ngamahlathi agciniweyo kunye namasimi eti, umbono uyamangalisa. Kwakwipropathi enye yindlu enkulu, iStumpfields, ekwamkela iindwendwe xa abaniniyo behamba, kunye nendlu encinci, i-Ivy ngezantsi kweBilberry, ebamba iindwendwe ezimbini. Ngelixa indlu nganye ibucala ngokupheleleyo, iigadi kunye nemihlaba yabelwanayo.
Iikhilomitha nje ezisi-7 ngaphandle kwedolophu yase-Ooty, le ndawo ikufuphi nazo zonke iindawo eziphambili zabakhenkethi kodwa ingasese kwaye ikude ngaxeshanye. Kude nesiphithiphithi sedolophu yaseOoty, iBilberry Cottage yindawo enoxolo yosapho, ejongene neendawo zeti, amahlathi asendle, kunye neenduli zeentaba.
Sinabasebenzi apha emini ukuxhasa iindwendwe, kwaye ebusuku abasebenzi bethu bafowunelwa kuphela ukuba kukho nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo. Sinamakhitshi axhotyiswe ngokwaneleyo ukuze uziphekele ukutya kwakho. Ngelixa ngaphambili besineziqholo ezininzi kunye neswekile, nceda uqaphele ukusukela nge-1 Feb, 2022 asisayi kuphinda siyenze loo nto. Siza kubonelela kuphela ngeziseko, ityuwa, ipepile kunye neoli. Ukuba ukhetha ukuqesha elinye lamanenekazi ethu ukuba akuphekele nceda uze negrosari yakho kwaye ujonge yethu "INCWADI YOKUPHEKA" inketho efumaneka kwincwadi yethu yendlu.
Sibongoza kuphela abantu abomeleleyo, abathanda indalo, abazimeleyo, abanobuchule, abantu abanomdla ukuba babhukishe iholide apha. Indawo yethu ayifanelekanga kwiindwendwe ezinenkxalabo enkulu yezonyango, ezingakwaziyo ukuhamba i-300 yeemitha ukuya endulini okanye abadala kakhulu. Indawo yayo yasendle nethambeka, kwaye ebusuku awuyi kuva ingxolo yezithuthi, kodwa kunokuba isandi somoya emithini, izikhova ebumnyameni, imvula phezu kophahla, iintaka kunye nezilwanyana. Ngelixa iingokuhlwa zinokuba nokukhanya komlilo, amakhandlela kunye nombane, xa izibane zicinyiwe, kuya kuba mnyama bhuqe macala onke. Xa isibhakabhaka sicacile iinkwenkwezi nenyanga mhlawumbi zezona zintle unokuze uzibone. Yinto yayo malunga nokuba sentabeni 8,000 ft ukuphakama, kungabikho ungcoliseko olugubungela umoya. Ngamanye amaxesha onyaka, ngakumbi kwi-monsoon, kumnyama ngokumangalisayo.
Iintaba ze-Ooty zipholile unyaka wonke, ngakumbi ebusuku. Ngelixa ngaphakathi kushushu kwaye kupholile, umoya osentabeni ngaphandle ukhawuleza! Kwabo bafuna inkonzo yegumbi, i-wifi, iTV, indawo yokutyela, kunye nenkonzo yabasebenzi beeyure ezingama-24 sicebisa ukuba ubhukishe ihotele kwidolophu yase-Ooty.
Yiza apha ulungele ukukhupha ii-imeyile kunye ne-intanethi, iiTV kunye neemuvi, kwaye uzame ukugoba isitovu senkuni ngekomityi yetshokolethi eshushu kunye nencwadi elungileyo. Vumela umzimba wakho kunye nengqondo yakho ukusetwa kwakhona kwaye uhlawule kwakhona njengoko uthoba kwaye uvumele indalo ekungqongileyo ikukhumbuze ukuba kukho indlela eyahlukileyo yokuphila.
4.74 out of 5 stars from 256 reviews
4.74 · Izimvo eziyi-256
Sihlala entlango, sizimele ngokupheleleyo kungekho ezinye izindlu ezikufutshane, ngaphandle kweStumpfields kunye ne-Ivy. Nangona kunjalo, kuba kuhlala kukho ezinye iindwendwe kwipropathi yethu kunye nabasebenzi abakhoyo ngexesha lemini, awuyi kuziva ulikheswa ngokupheleleyo. Ekupheleni kohambo lwethu, ecaleni kwendlela enkulu kukho ilali encinci apho kuhlala abavuni beti basekuhlaleni. Unokujonga le lali ukusuka kwibalcony ye-cottage. Siphakathi kumhlaba ongaphuhliswanga ngokupheleleyo oziihektare ezili-10 ongqongwe kwaye ojongene nehlathi likarhulumente elinguvimba. Ukufikelela kwethu kwiindledlana, iimbono ezingaqhelekanga, ukujonga izilwanyana zasendle kunye neendidi ngeendidi zeentaka kule ndawo iphakamileyo yemvula kunye noxolo kunye nokuba sodwa kwenza indawo yethu ibe yodwa phakathi korhwebo olugqithisileyo, iihotele zabakhenkethi ezixineneyo kunye neendawo zokulala e-Ooty nakwindawo ezingqongileyo. Siyazingca ngeenzame zethu zokukhusela okusingqongileyo okungqonge indlu yethu. Sigcina amabala ethu kunye nehlathi elisingqongileyo kunye namadlelo asingqongileyo ecocekile ngenkunkuma. Siyakucela ukuba usincede siyigcine inyulu.
Umbuki zindwendwe ngu- Stumpfields
Mna noGreg sihamba rhoqo ukuze singabikho xa usindwendwele. Sigcina ipropathi yethu inabasebenzi abalungileyo kunye neempelesi ezi-2, kunye nomgcini. Nangona kunjalo, nceda uqaphele ukuba balapho kuphela ngosuku phakathi kwe-9: 30 am kunye ne-7pm. Zonke ziluncedo kakhulu kwaye ziya kuphendula yonke imibuzo yakho. Zive ukhululekile ukufikelela kum nge-imeyile ukuba ungathanda ukundinika ingxelo okanye unemibuzo ethile kwaye ndiza kwenza konke okusemandleni am ukuphendula ngokukhawuleza.
Mna noGreg sihamba rhoqo ukuze singabikho xa usindwendwele. Sigcina ipropathi yethu inabasebenzi abalungileyo kunye neempelesi ezi-2, kunye nomgcini. Nangona kunjalo, nceda uqaphel…